Vanorarama neKutengesa muBulawayo Vowaniswa Mukana weKubaiwa Nhomba yeCovid-19
Chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira Covid-19 chaparurwa muBulawayo chinotarisirwa kubaya vanhu zviuru gumi nezvishanu.
Rimwe sangano rinomiririra vanorarama nekutengesa muBulawayo, reBulawayo Vendors and Traders Association, rinoti rinotambira nemufaro chirongwa chehurumende chekubaya nhomba yekudzivirira Covid-19 kuvanhu vanorarama nekutengesa icho chaparurwa muguta iri.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvezvirongwa musangano iri, uye vachiraramawo nekutengesa, Muzvare Debra Mukasa, vanoti vanofara nekuti hurumende yakanzwa chikumbiro chavo chekuti vanorarama nekutengesa vange vachibaiwa nhomba yekudzivirira Covid-19 kuitira kuti vakwanise kuvhura misika.
Chirongwa ichi chaparurwa munzvimbo nhatu muBulawayo dzinoti City Hall, Renkini neSokusile, uye hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu zviuru gumi nezvishanu, kana kuti 15 000, mukati memazuva gumi senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri.
Muzvare Mukasa vanoti vanotarisira kuti vamwe vasiri kutengesera mumisika yekanzuru vachabaiwawo nhomba iyi, sezvo kwanga kuchinzi vanhu vatange vaburitsa makadhi anoratidza pavanoshandira kuitira kuti vakwanise kubaiwa.
Vanotiwo vanhu zviuru gumi nezvishanu vanonzi nehurumende ichabaya nhomba vashoma zvikuru, asi vanoti zvakakosha kuti chirongwa ichi chatomboparurwa sezvo vachitarisira kuti hurumende ichawedzera huwandu uhwu.
Hurukuro naMuzvare Debra Mukasa